वसन्त Basanta 巴萨塔 バサンタ : ---लाई जाप्नीजमा के भन्छन्?
उसको जिज्ञासा त राम्रै हो, तर समस्या पर्छ आफूलाई। अब 'नाम्लो', 'दाम्लो', 'नाङ्लो' र 'मस्यौरा' लाई जापानीमा के भन्छन् भनेर भन्नु:)
Image Source: Masyauramaking
Posted by Basanta at 9:35 PM
kshama April 2, 2011 at 3:01 AM
Gud to see u on the blog!
Aakar April 3, 2011 at 8:24 PM
के हो ? किन यस्तो भा'को ? यस्तो भयो भने के हुन्छ ? भन्ने जस्तो कुरा सुनिरहेको सन्दर्भमा, यो कुरा केही फरक लाग्यो ! अब कसरी सिकाउने, कसरी सम्झाउने भन्ने कुरा अलि गाह्रै छ ।
भाषा को समस्या धेरै समयसम्म नरहे हुन्थ्यो !